WASIIRAKA A/GUDAHA & KUXIGEENKA QORSHAYNTA OO MAANTA SHIR JARAAID KU QABTAY MAGAALDA HARGAYSA | Toggaherer's Weblog
Wasiirka arimaha gudaha Somaliland Mudane Cabdilaahi Ismaaciil Cali Ciro iyo wasiirk ku xigeenka wasaarada qorshaynta qaranka mudan Ahmed Xaashi Abdi oo maanta shir jaraaid ku qabtay magaalada Hargaysa gaar ahaan ahaan xafiiska wasaarada arimaha gudaha ayaa ku sheegay in axsabta qaranku ay wadaan khar khal galin ay khal khal galinaya nagada iyo xasiloonida uu dalku jir.
Wasiirada oo arintaas ka hadlaayey sheegayna in rag badan oo dalka u soo halgamay ay dib u siqiireen waxaa ka mid aha hadaldiisii Nimanka ummadda ugu hanjabaya marka wakhtigaa la gaadho inta aanu madaxtooyada galno ayaanu Madaxweynaha qoorta soo qabanaynaa iyo erayo kuwaa ka sii fool xumaa oo ahaa marka afar oo dad ah madaxtooyada ay galaan ee la laayo ayuu raaca shanaad u dhici doonaa, waxaasi oo dhammi waa wax taariikhda ku jira oo ummaddu og-tahay. ninkii hunguri kursiga kaga jiraw ee doonaya inuu Somaliland ka taliyo dalkani xeer iyo sharci ayuu leeyahay ee ha lagu dhaqmo. Rag badan oo magac leh oo dalka u soo halgamay oo naftooda u soo huray oo muddo badan soo shaqeeyay inay rag badani maanta raadkoodii dib uga noqdaan waa ayaan darro.” Kuwasi waxay ka mid ahaayeen tiraabihii wasiirka arimaha gudaha Somaliland mudane Abdi laahi Ciro .
Waxa Wasiirku intaa ku daray in ay jiraan dad Somaliland u dhashay oo baqdin gelinaya ajnebiga martida ah ee dalka yimaad, una gudbiyaan warar cabsi-gelin nabadgeliyo-darro ah.
“Waxaan xasuustaa Gabadh Ingiriis ah oo doonaysay inay Somaliland buug ka qorto ayaa lagu Huteelka Maansoor waxaana lag u yidhaahdeen Nabadgelyo ma jirto dalka ee iskaga bax, waan u tagay waxay igu tidhi waxaan doonayay inaan Berbera iyo Burco tago laakiinse sidaas ayaa la igu yidhi waanay tagtay markay 5:00-tii galabnimo ka soo baxday waxa dhexda kaga jabay Baabuurkii ay wadatay nasiib wanaag waxa soo qaaday baabuur xamuula oo kuwa khudrada soo qaada ah, waxay Hargeysa ku soo noqotay iyadoo la yaaban nabadgelyada Somaliland ka jirta,” ayuu yidhi Md. Cabdillaahi Cirro.
Wasiirka Arrimaha Gudaha waxa kale oo uu sheegay in Komishanka Doorashooyinka Qaranku xaq u leeyihiin ku dhawaaqista waqtiga doorashada la qabanayo, isaga oo ku tilmaamay xisbiyada diidan dib-u-dhaca inay yihiin kuwo aan ku kalsoonayn taageerada ay haystaan. Waxaannu ku nuuxnuuxsaday in xukuumadda uu ka tirsan yahay jeceshahay doorasho dalka ka qabsoonta, iyaguna si sharaf leh xilka u wareejin doonaan haddii lagaga guulaysto doorashada.
Md. Cirro waxa uu beeniyay war ay warbaahintu ka qortay safarkii Madaxweyne Rayaale ku tagay dalka Ingiriiska oo sheegayey in aanay jaaliyadaha reer Somaliland ee dalkaasi habayaraatee soo dhaweyn oo dhabarka loo jeediyay laguna mudaharaaday, waxaanu tilmaamay in warkaasi mid aanay waxba ka jirin.
Dhinaca kale Wasiir-ku-xigeenka Qorshaynta Md. Axmed Xaashi Cabdi oo isna shirkaa jaraa’id ka hadlay, ayaa xisbiga KULMIYE ku eedeeyay inay leeyihiin masuuliyadda dib-u-dhaca ku yimi doorashada Madaxtooyada, isaga oo arrintaas ku sababeeyay muddadii laga sugayey soo magacaabidii xubinta ugu jirta Komishanka Doorashooyinka oo ahayd buu yidhi 9 bilood.
“Xisbiga KULMIYE ayaan qabaa inay leeyihiin masuuliyadda dib-u-dhaca doorashooyinka, waayo 9 bilood ayaa laga sugayey xubintii u gelilahayd Komishinka doorashooyinka Qaranka. Ta labaad iminka muddo ayaa la qabtay oo doorashadii loo cayimay, waanay ka horyimaadeen sababta aanay raalida uga ahayn, in aanay raali ka ahayn in Server-kaasi shaqeeyo oo la kala saaro dadkii is diiwaangeliyay si qof kastaaba u coddeeyo hal mar,” ayuu yidhi Axmed Xaashi.
Wasiirka ayaa shirkaa jaraaid kabid suaalo ay waydiyeen warbaahitu ku sheegay in masuuliyiinta uu eedaynayaa in ay ahaayeen halgamayaasha naftooda u soo horay xorayda dalka ayaaa wasiirku oo ahaa nabadsugidii taliskii Siyaad Bari xiligii la halgamaayey waxa uu u damqan waayey barigaas oo umada la xasuuqaayey ee maanta iskaga dhigaayo nin uga lexejeclo badan kusii naftooda u horay ee soo halgamay suaashaas oo keentay in deg deg uu u soo xidho wasiirku shirkaasi jaraaid.